Shilalekha » मार्सी चामललाई ब्राण्डिङ गर्ने दरवारमार्गको जुकोट दरवार रेस्टुराँ मार्सी चामललाई ब्राण्डिङ गर्ने दरवारमार्गको जुकोट दरवार रेस्टुराँ – Shilalekha
मार्सी चामललाई ब्राण्डिङ गर्ने दरवारमार्गको जुकोट दरवार रेस्टुराँ
५० लाख रुपैयाँको लगानीमा सुरु
९ चैत्र २०७७, सोमबार १७:४०
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण सवैभन्दा बढी प्रभावित हो रेस्टुराँ व्यवसाय !
विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण सुरु भएको लकडाउनले होटल तथा रेस्टुरा व्यवसाय उठ्नै नसकने गरी थला परे भने कोही बन्द नै भए । गत साल चैतको महिनामै लकडाउन सुरू हुनु अगाडी नै यो रेस्टुराँ सञ्चालन गर्ने तयारी भएको थियो । तर कोरोना महामारीले रेस्टुँरा खोल्ने योजना चौपट नै बनाइदियो । त्रिचन्द्र कलेज, घण्टाघरबाट दरबारमार्ग जाने क्रममा महेन्द्रको शालिक नपुग्दै दायाँतिर भेटिन्छ, जुकोट दरबार रेस्टुराँ एण्ड लाउञ्ज !
बाजुराका घर भएका तरुण युुवा नेता सरोज बहादुर शाहि र अमृत बहादुर शाहीले काठमाडौको दरबारमार्गमा करोड भन्दा बढिको लगानिमा रेष्टुुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याएका छन् । स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिका ३ जुुकोट घर भएका शाहिले जुकोट दरबार रेष्टुरेन्ट लाउन्ज बार नामक सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।
रेष्टुरेन्टमा मार्सी चामलको खाना देखि स्थानिय लोकल खाना तथा परिकार उपलब्ध हुुने गरेको छ । रेष्टुुरेन्ट सञ्चालनमा आएको एक महिना पुुगेको छ ।
रेष्टुुरेन्टमा विहान ८ बजे नै खुल्ने यो राती ३ बजेसम्म चहलपहल भईरहन्छ । अन्य रेस्टुराँमा राती प्रायः १० बजे नै किचेन बन्द हुन्छ । तर, यहाँ भने तीन बजेसम्म आफ्नो रोजाइका परिकार निर्धक्क अर्डर गर्न सकिन्छ । लोकेसन र पार्किङ सुविधा भएकाले धेरैले आफ्नो रेष्टुुरेन्ट रोजाईमा परेको शाहि बताँउछन् ।
यस रेस्टुराँमा सबैभन्दा अर्डर हुने आइटम हो, मार्सी खाना । बाजुराको कालो सिमीको दालसँग यो आइटम दैनिक २ दर्जन भन्दा बढी अर्डर हुन्छ । यस बाहेक झानेको मम, बँदेलको तास, बँदेलको टिमुर, बँदेल तारेको आइटम यहाँका स्पेशल परिकार हुन् । इटालियन र मेक्सिकन परिकार पनि उपलब्ध छन् । मार्सी भातको आइटम दैनिक २५ भन्दा बढी अर्डर हुने गरेको उनी बताउँछन् । यसको मूल्य ७ सय रुपैयाँ राखिएको छ ।
दुबई र चेक रिपब्लिकमा काम गरेका अनुभवी सेफ भुपेन्द्र खड्काको मातहतमा २ जना कुक छन् ।हरेक हप्ता सेफ खड्काले स्टाफलाई फुड् र हस्पिटालिटीका बारेमा प्रशिक्षण दिने गरेका छन् । विशेष कार्यक्रम र पार्टीहरु भएका बेला दैनिक कारोबार अहिले १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि हुने गरेको उनी बताउछन् । खानाका परिकार स्थानीय स्वाद पस्किने र स्थानीय उत्पादनहरुलाई बढि नै प्राथमिकता दिने उनको लक्ष्य छ ।